Vuka uve isandi seentaka kunye nomoya osebezayo eCathy's Cottage, indawo yokuzimela yothando 'elungele izinja' phakathi kwe35ha yemithi kunye namasimi eWuthering Heights, 6km N yaseClare.
I-cosy, i-cottage engasese inesitovu se-potbelly kwaye ifanelekile kwabo banandipha ukusondela kwindalo. Iikhangaru zisoloko zindwendwela, iindidi zeentaka ezingama-42 zihlala kwimithi engama-25,000 yale ndawo, kwaye kukho iialpaca ezimbini ezihlala kulo.
Pheka ukutya kwakho kwakusasa ngesisa phezu komlilo ovulekileyo, okanye usebenzise i-BBQ eyadini.
I-Cathy's Cottage yamkela zonke izibini kunye nabahlobo babo abathandekayo abanemilenze emine kunye nemibono emihle ye-360-degree ejongene ne-vista evulekile yemithi kunye neenduli ezinengca etshayelayo apho izinja zithanda ukubaleka, ngaphandle kwe-leash.
Ngaphakathi kwendlwana epholileyo, ezimeleyo, uya kufumana zonke izinto eziyimfuneko ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke kwaye kukhetheke kangangoko, nokuba injani na imozulu. I-air conditioner ebuyela umva kwigumbi lokuhlala elinomgangatho we-slate izolile kwaye iyasebenza, ngelixa isitovu sesisu sembiza sibonelela nge-ambience emangalisayo ngexesha lemozulu epholileyo. Zonke iilinen zinikezelwa, kunye neengubo zombane.
Ekhitshini uya kufumana iimbiza kunye neepani zokupheka uqhwithela ngelixa ujonge imbonakalo entle, engaphazamisekiyo yeentsini zakudala kunye nehlathi. Ikhitshi livula kwipatio enesiqingatha esine-BBQ kunye nesofa ekhululekile apho unokubukela khona iintaka kunye neekhangaru.
Intendelezo enomtsalane ikwabiyelwe ngocingo kunye nocingo lwepikethi apho unokukhusela izinja zakho ngelixa undwendwela iindawo zokutyela kunye neendawo zokuthengisa iwayini.
Iimbono ezintle zinokonwatyiswa ukusuka kwigumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlala elahlukileyo. Iindwendwe ezininzi ziyakuthanda ukubukela ilanga lisiya kutshona kwiveranda engaphambili ngaphambi kokuba zirhoxe ukuya kwipatio engasemva apho zinokubhadula ngaphandle kwesango elincinane ukuya kwindawo yomlilo enomlambo owomileyo emazantsi enduli kumgama weemitha ezimbalwa.
Zininzi iintaka iikhangaru ezityelela rhoqo.
I-Foxtel ibonelela ngokonwabisa ngaphakathi ngelixa ungaphandle, iindwendwe zinokuthatha ithuba leenkuni ezininzi zomlilo okwithambeka eliphakathi kwendlwana kunye nebhedi yomlambo.
Isitshixo sishiywe emnyango ukususela ngo-3 PM ukuya phambili kwaye iholide yi-11:00 AM ngosuku lokuhamba.
YINTONI ENYE ESIYINIKAYO
Sinikezela ngokuzimela ngokupheleleyo, umoya omtsha welizwe kunye nobomi beentaka. Kwakhona, iinkuni zokubasa ubusuku obubini ukuze zisetyenziswe kwisitovu sesisu sembiza okanye kwindawo yomlilo. Enye iingceba ezili-15 zokhuni oluvuthayo luyi-20 eyongezelelweyo onokuyiodola phambi kwentsimbi ye-12 emini.
Ubusuku obuninzi obumangalisayo buchithwe eCathy's Cottage kusenziwa iisampulu zeediliya zalapha ekhaya ngelixa sonwabele i-BBQ-igesi ehlotyeni okanye ibaswe ngamaplanga ebusika. Asikho esinye isakhiwo esiphazamisa iliso ngoxa uninzi lokuhamba-hamba lunokunanditshwa kumawaka emithi.
Yonke into ikwinqanaba elinye ngoko ke iyintandokazi kwabo bangakwaziyo ukufikelela kwizinyuko.
Ukuba iCathy's Cottage ivakala njengelizwe elimangalisayo lokubaleka olifunayo, sijonge phambili ekwamkeleni.
Ifakwe kwi-6km emantla elokishi yaseClare, iCathy's Cottage eWuthering Heights, yi-3km ukusuka kweyona ndlela ikufutshane - iMain North Road edibanisa iAdelaide kunye neFlinders Ranges. Ikwayimizuzu emi-5 yokuqhuba ukusuka kwibala legalufa kunye nemizuzu emithathu yokuqhuba ukusuka kwiClare Racecourse.
IAdelaide ikwiyure ezimbini ukuya emazantsi.
Ababuki zindwendwe, uTed noTanika, bahlala kude kwimizuzu emihlanu ngoko bayakuvuyela ukukuzisela iinkuni ezininzi, okanye bakuxelele ngezilwanyana zasekhaya zeentaka kunye nezilwanyana zasendle, iindawo zokutyela kunye neekhefi.
Iindwendwe ezininzi zibuya rhoqo, ngoko ke ukubamba kusoloko kumnandi.
Kodwa ukuba indawo yokuzimela luluvo lwakho lwezulu, iCathy's Cottage - njengayo nayiphi na indawo yezindlu ezintathu ezibekwe ngokwahlukeneyo eWuthering Heights - ilungile.
Ababuki zindwendwe, uTed noTanika, bahlala kude kwimizuzu emihlanu ngoko bayakuvuyela ukukuzisela iinkuni ezininzi, okanye bakuxelele ngezilwanyana zasekhaya zeentaka kunye nezilwa…